Nnukwu onye enyèmaka pụrụ iche nye aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ n'ihe gbasaara ọrụ pụrụ iche na inweta akwụkwọ ikike e ji atụ akwụkwọ, bụ Dọkịnta Amaka Akudo mere ka a mara nke a n'okwu ọ gwàrà ndị nta akụkọ n'isi ụlọ ọrụ ya dị n'Awka. O mere ka a mara na ọ bụ ihe dịka mmadụ ruru ndè abụọ na ụma asaa debànyere aha n'akwụkwọ na steeti ahụ n'ahọ gara aga n'ịkwadobe maka nhọpụta ọkwa gọvanọ ahụ e mere na ya, ma sịkwazie na ọ bụ site n'ọkwà pụrụ iche a na-ama n'ebe dị iche iche na steeti ahụ na otu e sikwa ajali ndị mmadụ babyere idebànye aha ma inweta ya bụ akwụkwọ ikike ahụ mere ọnụ ọgụgụ ahụ jiri gbagoo n'ike.
Dọkịnta Akudo kwara arịrị na e nwere ọtụtụ akwụkwọ ikike dọọrọ n'ụlọ ọrụ ndị INEC nakwa n'okpuru ọchịchị dị iche iche maka na bdị nwe ha abịabeghị were ya. Ọ dụzịkwara onye ọbụla bụ ezi nwaafọ ala Nigeria, bụ onye enwetebeghị akwụkwọ nke ya ka o mee ngwa ngwa ga weta nke ya ugbu a, maka na echi pụrụ ịdị anya, ọ bụnadị dịka ụlọ ọrụ INEC kwugoro na oge adịghị anya, na ha ga ebibìsị akwụkwọ ikike niile ahụ nke ndị nwe ha abịabeghị were.
Ọ gakwara n'ihu kwuo na gọvanọ Obianọ nwere nnọọ ezi mmasị na ebumnobi ịhụ na onye ọbụla ruru ogo ịtụ akwụkwọ na steeti ahụ nwetara akwụkwọ ikike ya, iji hụ na a napụghị ya ikike dịịrị ya, ma kwuo na ọ bụ nke ahụ mere o jiri guzobe ụlọ ọrụ ya ahụ, ka e wee si na ya maa ekwe bànyere nke ahụ ma kụzikwara ndị mmadụ ihe ha kwesiri ịma banyere ịtụ akwụkwọ na nhọpụta ọchịchị.
Ọ kpọkuzịkwara ndị edebanyebeghị aha ma ya fọdụzie inweta akwụkwọ ikike ka ha gbaa mbọ mee nke ahụ ọsọ ọsọ, tupuu ụbọchị Frayịdee izu ụka a, bụ ụbọchị agba nke ndebanye aha ahụ ga-abịa n'isi njedobe, maka na ya bụ ụbọchị a kara aka n'ahọ 2019 na-akpụdobezịkwa nso n'ike n'ike, tinyere na onye enweghị akwụkwọ ikike enweghịkwa ọnụ okwu ụbọchị ahụ.